chang - Synonyms of chang | Antonyms of chang | Definition of chang | Example of chang | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for chang
Top 30 analogous words or synonyms for chang
ချန်အဲ ၁ လကမ္ဘာလေ့လာရေးယာဉ် ချန်အဲ ၁ (pronounced roughly "chang-uh", ; ) အာကာသယာဉ်သည် တရုတ်နိုင်ငံကပစ်လွှတ်သော လပတ်လူမဲ့စက်ရုပ်အာကာသယာဉ်ဖြစ်သည်။ တရုတ်လလေ့လာရေးအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာကာသယာဉ်အမည်မှာ တရုတ်လနတ်သမီး ချန်အဲကို အမှီပြုပြီးမှည့်ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
နန်ကျင်း တက္ကသိုလ် နန်ကျင်းတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားဟောင်းများထဲတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခေတ်သစ် သိပ္ပံစွန့်ဦးတီထွင်ပညာရှင် ဝိုင် အိပ်ဂျ် ဝူး (Y. H. Woo)၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး ရူပဒေအမျိုးသမီး ပညာရှင် ချန်ရှိအန်ဝူ (Chien-Shiung Wu)၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဗဟိုဘဏ်စနစ်ကို တည်ထောင်ခဲ့သူ ဆု ပို ယန် (Hsu Po-Yuan)၊ စင်ကာပူနိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်းကို တည်ထောင်ခဲ့သူ တန် အိ ဖန် (Tang I-Fang)၊ ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်ငန်း တည်ထောင်သူ ချောင် ချန်း (Chang Cheh)၊ တရုတ်နိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ နိုင်ငံရေးသမား ဂေါင်ကန် (Guo Quan) တို့ပါဝင်သည်။
ဟာတူးရွာ ရှေးအခါများ၌ ချင်းလူမျိုးများသည် မိမိကိုယ်မိမိ ချင်းဟူ၍ မခေါ်တွင်ခဲ့ကြပေ။ ဇိုမီး၊ မီဇို၊ လိုင်မီး၊ ဒိုင်၊ ခူမီး၊ ခိုျး၊ ယော၊ အရှို စဟူ၍သာ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ချင်းဟူသော ဝေါဟာရများသည် မည်သည့် ချင်းမျိုး နွယ်စုတွင်မှ မခေါ်ခဲ့ကြပေ။ မြန်မာစကား၊ မြန်မာအခေါ်များတွင်သာ တွေ့ရတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် ‘ချင်း’ ဝေါဟာရသည် ဗမာများ၏ “သူငယ်ချင်း၊ အချင်းချင်း”ဟူသော စကားမှ ပေါ်ထွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟူသည့် အယူအဆ၊ အဆိုများ ရှိခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ခေါ်ကြရာတွင် ချင်းမှ ကချင်ကို ‘ကချင်’၊ ရှမ်းကို ‘ရှန်’၊ ကရင်ကို ‘ကလန်’၊ ရခိုင်ကို ‘လခုန်’၊ ဗမာကို ‘ကောလ်’ ဟူ၍ ခေါ်ကြလေသည်။ ကချင်များမှ ခန်း (Khang)၊ ရှမ်းများမှ ချန်း (Chang)၊ ကရင်များမှ ချော (Chaw)၊ မွန်များမှ ချီးယဲန်း (Chieng)၊ ခယဲန်း (Khyeng)၊ ရခိုင်များမှ ချားန် စသည်ဖြင့် တိုင်းရင်းသား လေသံများဖြင့် အချင်းချင်း ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ယူနန်ပြည်နယ် ဘီစီ ၂၂၁တွင် ချင်းရှီဝှမ် (Qin Shi Huang) က တရုတ်ပြည်ကြီးကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခဲ့ရာ တောင်ဘက်ပိုင်းဒေသများအထိ ဩဇာသက်ရောက်ခဲ့သည်။ ယူနန်ပြည်နယ်တွင် စစ်ဒေသများ၊ စီရင်စုများ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဘီစီ ၁၀၉တွင် ဟန့်မင်းဆက်ဘုရင် ဝူ (Emperor Wu of Han China) သည် ဗိုလ်ချုပ် ကောချောင့် (Guo Chang (郭昌)) ကို ယူနန်ဒေသသို့စေလွှတ်ခဲ့ပြီး ယီကျိုးစစ်ဒေသ (Yizhou commandery) နှင့် စီရင်စု ၂၄ခုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ စစ်ဒေသမြို့တော်မှာ ယနေ့ခေတ် ကျင်းနင်မြို့ (Jinning 晋宁) ဖြစ်သည်။ မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတို့နှင့် ကုန်ကူးသန်းရေး တိုးတက်ရန်အတွက် ဝူဘုရင်သည် ထန်မွင့် (Tang Meng (唐蒙)) ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ထိုခေတ်အချိန်တွင် ယူနန်ပြည်နယ်၏ စိုက်ပျိုးရေးမှာ များစွာဖွံ့ဖြိုးနေပြီဖြစ်ပြီး ကြေးလက်နက်များ၊ ထွန်သွားများ နှင့် ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်း၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက်၊ ခွေး မွေးမြူခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ မနုဿဗေဒပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ အဆိုပါ လူမျိုးများသည် တိုင်လူမျိုး (Tai peoples) များ ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအနေဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ကြကာ တစ်ခါတရံတွင် တရုတ်ပြည် ဘုရင်ကို ပုန်ကန်၍ တရုတ်ပြည်မှ ထွက်ပြေးလာကြသော တရုတ်လူမျိုးများက ခေါင်းဆောင်လုပ်ကြသည်။
ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ The results led toashake up of the party leadership. Su Tseng-chang resigned as DPP chairman soon after election results were announced. Su had pledged to step down if the DPP lost either Taipei County or failed to win 10 of the 23 mayor/magistrate positions. Vice President Annette Lu was appointed acting DPP leader. Presidential Office Secretary-General Yu Shyi-kun was elected inathree-way race against legislator Chai Trong-rong and Wong Chin-chu with 54.4% of the vote.
ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ Premier Frank Hsieh, DPP election organizer and former mayor of Kaohsiung twice tenderedaverbal resignation immediately following the election, but his resignation was not accepted by President Chen until January 17, 2006 after the DPP chairmanship election had concluded. The former DPP Chairman Su Tseng-chang was appointed to replace Hsieh as premier. Hsieh and his cabinet resigned en masse on January 24 to make way for Su and his new cabinet. President Chen had offered the position of Presidential Office Secretary-General (vacated by Su) to the departing premier, but Hsieh declined and left office criticizing President Chen for his tough line on dealing with the PRC.